Asebuyele ‘ekhaya elidala’ ama-SAMA Awards | News24
Asebuyele ‘ekhaya elidala’ ama-SAMA Awards
Cape Town – Umcimbi waminyaka yonke wokuklomelisa ngezindondo kubaculi abavelele, ama-South African Music Awards (SAMA) uzobanjelwa eSun City Superbowl ngomhlaka-26 kuMeyi.
Le ndawo ewubukhazikhazi esesifundazweni iNorth West iyona esimenyezelwe ngokusemthethweni ukuthi izosingatha lo mcimbi wama-SAMA Awards wesi-23, njengoba isike yasingatha imicimbi engu-14 kwengu-22 edlule kusukela aqala ukuba khona ngonyaka ka-1994.
OLUNYE UDABA: IQINISO lihleli obala kuputshuka imiphumela yama-Metro FM Awards
“Kuyintokozo enkulu ukubuyela eSun City. Simema abathandi bomculo wasekhaya ukuba bajoyine umkhakha (wezomculo) njengoba uthatha uhambo olubheke eSun City,” kusho oyisikhulu esiphezulu kwa-RiSA, okuyiyona ehlela lo mcimbi.
Kulindeleke ukuthi kube nenqwaba yemicimbi yobumnandi eduze neSun City, njengoba lo mcimbi uvamise ukuheha inqwaba yabathandi bomculo.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka odlule ama-SAMA Awards ayebanjelwe eDurban ICC njengoba iSun City yayisohlelweni lokwenziwa kabusha olwabiza izigidigidi zamarandi.